I-acetone kumchamo: okujwayelekile, izimbangela zokuphambuka nokwelashwa > Ukuxilonga
I-acetonuria noma i-acetone kumchamo kubantu abadala: izimbangela kanye nokwelashwa, ukuvimbela ukuqongelela izinto eziyingozi emzimbeni
I-Acetone iyinto enobuthi eyakhelwe emzimbeni wethu ngenxa yezinqubo zemvelo kanye nemetabolism. Ngakho-ke, akumangazi ukuthi ngisho nakubantu abaphilile ngokuphelele bukhona emchameni. Kodwa-ke, kwezinye izikhathi, okuqukethwe kwayo kukhula kakhulu futhi kukhula ngokuqinile, okungase kukhombise ukuba khona kwanoma iyiphi i-pathologies nezifo. Ake sizame ukuthola ukuthi imuphi umkhuba we-acetone womchamo wabamele izigaba ezahlukahlukene zeminyaka futhi ngaphansi kwaziphi izimo kufanelekile ukukhulisa i-alamu.
Izimbangela zokuqongelela kwezinto eziyingozi emzimbeni
Ukuqongelela okwedlulele kwemikhiqizo engxenye ye-oxidation kwenzeka ngaphansi kwethonya lezinto eziningi. I-Ketonuria iyingozi ikakhulukazi kwabesifazane abakhulelwe kanye nasezigulini ezinezindlela ezinzima ze-pathologies ezingamahlalakhona. I-Acetonuria iyisibonakaliso sokuphazamiseka kwe-metabolic, ingakhula nge-endocrine pathologies, ngokwesibonelo, isifo sikashukela.
Izizathu eziphambili zokwanda kwe-acetone emchameni:
ukuzila isikhathi eside
ukusetshenziswa njalo kokudla okukhawulela ukudla kwama-carbohydrate,
ukungondleki, umlutha kokudla okuthosiwe, okunamafutha,
amaprotheni amaningi ekudleni, okunzima ukuwohloka,
ukuncipha kwamanyikwe ngohlobo 2 sikashukela,
isifo sikashukela i-mellitus (uhlobo lokuqala lwe-pathology),
ukukhuphuka okukhulu kwamazinga we-insulin,
izifo ezithathelwanayo ezinzima
ukuvivinya umzimba ngokuzivocavoca, ukuzivocavoca okwedlule
ukudakwa ngemuva kokuphuza ngokweqile noma umzimba uthola iziphuzo ezisezingeni eliphansi,
ubuthi ngamakhemikhali nosawoti wezinsimbi ezisindayo: umkhondo, i-phosphorus, atropine,
uhlobo olubi lwe-toxicosis ku-trimester yesithathu kwabesifazane abakhulelwe,
ukwehla kakhulu komzimba ngokuncipha kwesisindo,
ukusetshenziswa kwe-anesthesia equkethe i-chloroform,
i-stenosis ye-esophagus noma i-pylorus,
ukugabha okungenamsoco ngokuphelelwa ngamandla emzimbeni ngesikhathi sokukhulelwa,
Funda ngezindlela zokwelapha zotshani obudotshwe ngezinyawo kanye nokusebenzisa amakhambi ukwelapha amatshe ezinso.
Imithetho ejwayelekile nezindlela ezisebenzayo zokwelapha i-dysplasia yezinso ezinganeni ziqoqwa kule ndatshana.
Izimpawu zokuqala nezimpawu
Ukuqongelelwa kwemikhiqizo ye-oxidation engaphelele kukhinyabeza ukudakwa, futhi isimo esejwayelekile siyanda. Ukuqothuka okubuthakathaka kwemizimba ye-ketone kunciphisa amandla okusebenza, i-lethargy, isimo sokuxineka sivela.
Ezinye izimpawu ze-acetonuria kubantu abadala:
umchamo unuka kabi
ungakwazi ukuhogela i-acetone ephuma emlonyeni wakho.
Imvelo yezidumbu ze-ketone emchameni
Uma kungekho zinkinga ze-metabolic, ukudla okwanele kwama-carbohydrate, umsoco ofanele kumchamo, i-acetone akufanele ibe khona. Ukuqoqwa kwe-acetoacetic acid, i-acetone incane kakhulu kangangokuba ukuhlaziya akubonisi okuqukethwe kwemikhiqizo yokubola. Ngokusebenza kahle komzimba, imizimba ye-ketone engamanani angama-20 kuye kwangama-50 mg ngosuku ithunyelwa njalo kusetshenziswa izihlungi zemvelo.
Lapho kutholwa izidumbu ze-ketone, umsizi welebhu wenza amanothi (akhombisa inani lama- "pluses"):
inketho eyodwa: "+" - ukusabela okuhle okubuthakathaka,
inketho yesibili: "++" noma "+++" - ukusabela ku-acetone kuyinto enhle,
inketho yesithathu: "++++" - izinga eliphakeme lemizimba ye-ketone, impendulo ebukhali enhle. Ukulaliswa esibhedlela nokwelashwa okuphuthumayo kuyadingeka ngokushesha.
I-acetone ephakanyisiwe emchameni, amanani ajwayelekile kubantu abadala nezingane ahlukile, angakhombisa i-acetonuria. Njengomthetho, lokhu kuyabonakala kubantu abanesifo sikashukela noma ekudleni okweqile, kodwa-ke, ngenxa yezici ezahlukahlukene, kuvame ukwenzeka kwabesifazane nabesilisa abanempilo ephelele abalandela indlela efanele yokuphila. Uma kungekho zinyathelo ezithathwayo, khona-ke ngokuqhubeka kwesikhathi, i-acetonuria ingakhula ibe yi-ketonemia, eye yakhuluma ngezimpawu futhi ihambisana nemiphumela emibi eminingi.
Ngaphambi kokukhuluma mayelana nokuthi yiziphi izinkambiso ze-acetone kumchamo, ake siqale sibheke izizathu zokusungulwa kwalesi simo se-pathological.
Phakathi kwezinto ezibalulekile, okulandelayo kungahlukaniswa:
ukuphuza okunganele kwamanzi, okuholela ekuphulweni kwemali esele,
ukukhathala komzimba okubangelwa yindlala ende noma ukudla okuqinile kakhulu,
ukusebenza ngokweqile komzimba
ukuhlinzwa okwenziwa ngaphansi kwe-anesthesia ejwayelekile,
ukuthatha imishanguzo ethile
imiphumela yezifo ezithathelwanayo.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi imvamisa kakhulu imvamisa ye-acetone kumchamo yephulwe ngesikhathi sokukhulelwa. Lokhu kungenxa yokuthi emzimbeni womama olindelekile kunezinguquko eziningi futhi isizinda se-hormonal siyaphazamiseka. Lokhu kubhekwa njengokujwayelekile ekusebenzeni kwezokwelapha, noma kunjalo, kudinga ukwelashwa ngokushesha, ngoba i-acetonuria yisimo esiyingozi futhi esithuthukayo esingaholela emiphumeleni emibi ehlukahlukene.
Izinkinga ezingaba khona
I-acetone ephakanyisiwe emchameni, imbandezelo yayo izonikezwa ngezansi, uma ingekho yokwelashwa okufanele iholele ketonuria.
Lokhu kudalwa kwezifo eziyingozi kuyingozi enkulu, ngoba kuholela ekudakweni komzimba wonke futhi kungadala izinkinga ezilandelayo:
ukulimala kwe-mucosa esiswini,
ukwephulwa kwemali esele ye-acid,
ukulimala kwamangqamuzana obuchopho kanye ne-edema yalesi sitho,
Kungakho kubalulekile kakhulu ukuthi ngezikhathi ezithile uhlolwe esibhedlela futhi uthathe izivivinyo ukuze uqale ukwelashwa okufika ngesikhathi uma kunesidingo.
Ukubonakaliswa kwemitholampilo kwe-acetonuria
Le pathology ihambisana nezimpawu ezikhulunywayo, okuvele kungenakwenzeka ukuthi ungaziboni, ngakho-ke wonke umuntu ngokuzimele angakwazi ukuxilonga.
Izimpawu zokuma kwe-acetonuria yilezi:
ukuphefumula okubi kanye nomchamo, kubhebhethekisa kakhulu ukusetshenziswa kokudla okune-protein eningi,
umkhuhlane, ongeke wehliswe phansi ngosizo lwemithi ye-antipyretic,
ikhanda elinzima lisakazeka ekhanda lonke,
isifiso esingesihle sokudla noma ukuswela kwaso ngokuphelele,
ukuguquka kwemizwelo okungazelelwe
ukunganaki konke okwenzekayo
gazulula ekudleni konke.
Cishe njalo, lezi zimpawu zenzeka ngasikhathi sinye, ngakho-ke, uma usuzibonile, kufanele uye esibhedlela ngokushesha uyohlolwa umchamo. I-Acetone, okujwayelekile ukuthi icishe ikhushulwe njalo, kungaholela ekutheni ubuthi bomzimba bube nzima, ngenxa yokuthi izinqubo eziningi ezingenakulungiswa zingakhula.
Rated Ketone Rate
I-acetone kumchamo, into ejwayelekile kubantu abadala nasezinganeni ayifani futhi kuya ngezici eziningi, ihlala ikhona, ngoba ingumkhiqizo osuselwa kumphumela wamaprotheni ongapheleli. Kodwa-ke, ngokwanda kokuqukethwe kwayo, isimo sempilo yabantu sawohloka kakhulu. Uma umuntu omdala akha kusuka kuma-milligram angama-10 kuye kwangama-30 ama-ketones agcwele emzimbeni, khona-ke asikho isizathu sokukhathazeka nokwelashwa akudingekile. Isikhombi esifanelekile yi-1-2 mg nge-100 ml. Lokhu kuphakamisa ukuthi umuntu uphilile ngokuphelele futhi zonke izitho nezinhlelo zisebenza ngokujwayelekile. Kulokhu, i-acetone ikhishwa ngokuphelele emzimbeni ngomchamo. Ezenzweni zokwelapha, inani lama-ketones anele liboniswa amayunithi we-mmol / ilitha. Ngakho-ke iyini i-acetone evumelekile kumchamo? I-Norm mmol isebangeni ukusuka ku-0,5 kuye ku-1.5. Uma ohlelweni lokuhlaziya umphumela uzodlula la manani ngisho kancane, khona-ke lokhu kungakhombisa ukuba khona kwezinkinga.
Izindlela eziphambili zocwaningo lwelabhoratri
Ukunquma izinga le-ketones eligcwele emzimbeni womuntu ekwelashweni kwanamuhla, kusetshenziswa izinhlobo eziningana zokuhlaziya.
Phakathi kwazo, ezisebenza ngempumelelo kakhulu futhi ezivame ukunqunywa yilezi ezilandelayo:
Isivivinyo sokubonisa. Ngalo, ungazihlaziya ngokwakho ekhaya. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthenga imicu ekhethekile ekhemisi, egxilisiwe umchamo imizuzwana embalwa. Ngemuva kwemizuzu nje embalwa, umphumela uzobe usulungile. Izinkomba zinqunywa kusisekelo sesikali sombala esikhonjiswe kwiphakheji kuhlolo lwe-Express.
I-Urinalysis Kwenziwa elabhorethri futhi kunikeze imininingwane eningiliziwe ngezinga le-acetone nokwakheka komchamo.
Ukuqoqwa komchamo nsuku zonke. Le ndlela yokuxilonga iyona efundisa kakhulu, kepha futhi iyinkimbinkimbi kakhulu. Inezindleko eziphakeme, ngakho-ke yabelwa ezimweni ezingavamile kakhulu.
Inketho enhle uvivinyo lomchamo ojwayelekile, ngoba kungenziwa kunoma yisiphi isikhungo sezempilo sombuso mahhala. Ngaphezu kwalokho, ikuvumela ukuthi ukhombe i-acetonuria ekuqaleni kwezigaba bese uqala ukwelashwa kwayo.
Imvamisa yama-ketones agcwele emzimbeni wengane
Njengoba kushiwo ngaphambili, indlela ejwayelekile ye-acetone kumchamo wengane yehlukile enkombeni efanayo esebenza kubantu abadala. Ngokusho kochwepheshe abanolwazi, umchamo ezinganeni, imvamisa, ama-ketones agcwele akufanele abe khona, ngoba avela kokutholakala kwendalo. Ngokuqondene nokufundwa okuvumelekile, asebangeni ukusuka ku-0,5 kuye ku-1.5 mmol / L. Uma i-acetone ikhuphuka ifinyelela inani le-4, khona-ke lokhu kubonisa ubukhona be-pathology elinganiselayo, no-10 - isilinganiso esinzima. Ngasikhathi sinye, kubaluleke kakhulu ukuqala ukwelashwa okufika ngesikhathi ukuze ugweme imiphumela eminingi emibi.
Ukubonakaliswa kwe-ketonuria ezinganeni
Yini okudingeka uyazi ngalokhu? ukuba nolwazi mayelana nokuthi yini imvamisa ye-acetone kumchamo wengane futhi, uma unombono wezimpawu ze-ketonuria, uzokwazi ukubona i-pathology enganeni yakho ngesikhathi bese uqala ukuyiphatha. Ukubonakaliswa okuyinhloko kwemitholampilo kucishe kufane ngokuphelele nalokho okutholakala kubantu abadala, noma kunjalo, kukhona umehluko.
Ngakho-ke, ngokwesibonelo, okulandelayo kufakwa ezimpawu ezijwayelekile:
Ubuhlungu obukhulu besisu
izinga lokushisa eliphakeme, elingakhuphukela kuma-39 degrees,
ukuphazamiseka ohlelweni oluphambili lwezinzwa.
Ingozi enkulu ngasikhathi sinye ukuthi umzimba wengane awukakhuli ngokwanele futhi uqinile, ngakho-ke ingozi yokuhlaselwa ikhehla iphakeme kakhulu kunabantu abadala. Ngakho-ke, uma imvelo ye-acetone kumchamo wengane yanda, khona-ke udinga ukuya esibhedlela ngokushesha. Ngaphandle kwalokho, kungenzeka ngokufa okuphezulu.
Okuqukethwe kwe-acetone okuvumelekile kwabesifazane abakhulelwe
Njengoba kushiwo ngaphambili, emzimbeni wowesifazane ophethe umbungu, kwenzeka izinguquko ngemuva kwesizinda se-hormonal, okubuye kuthinte ukwakheka kwegazi nomchamo we-physico. Ngasikhathi sinye, lokhu kubhekwa njengokujwayelekile, ngakho ezimweni eziningi akukho ukwelashwa okudingekayo, ikakhulukazi njengoba omama besikhathi esizayo, bebonke, kufanele baphuze imithi embalwa ngangokunokwenzeka ukuze bangalimazi umntwana.
Isimo esivumelekile se-acetone kumchamo wabesifazane abakhulelwe sisezingeni le-10 mmol / l. Isizathu sokwanda kokuqukethwe kwama-ketones agcwele yi-toxicosis, okuyindawo evamile ngokungondleki. Kodwa-ke, uma ukuhlaziya kukhombisa cishe ama-30 mmol nangaphezulu, khona-ke lokhu sekuvele kukhombisa ubukhona be-pathology eqhubeka ngefomu elibi.
Izimpawu eziphambili ze-acetonuria kwabesifazane abakhulelwe
Kunzima kakhulu ukuthi omama besikhathi esizayo bazonquma ngokuzimele izinga le-acetone emzimbeni ngenxa ye-toxicosis, yona ngokwayo eye yazibiza izimpawu.
Ukuze ungaqali inkinga, kufanele kunikezwe izimpawu ezilandelayo:
i-migraines ephikelelayo, eyenziwe endaweni yonke kuswazi,
Ubuhlungu obukhulu esiswini kanye ne-pelvis,
ukoma okukhulu okungenakuqedwa.
Uma uqaphela ukubonakaliswa okunjalo, ngakho-ke ungabashiyi benganakwa. Kufanele uthintane nodokotela ngokushesha futhi uphumelele izivivinyo ezidingekayo.
Ungakudlulisela kanjani ukuhlolwa komchamo: izeluleko zeziguli
Ukulungiselela ukuqoqa uketshezi oluhoxisiwe akufani nenqubo ejwayelekile: bamba indlu yangasese yezitho zangasese, ugcwalise isitsha esiyinyumba ngomchamo, bese uletha lokho egumbini lokugcwala. Ukuhlaziywa okujwayelekile komchamo, ingxenye yasekuseni iyadingeka, umthamo womchamo uvela ku-50 ml.
Ngokusekelwe emiphumeleni yocwaningo lwamanzi ahoxisiwe, uchwepheshe uphetha isigaba se-ketonuria. Lapho "ama-pluses" ethe xaxa ehlaziyeni, likhulu izinga lokuphambuka. Kubalulekile ukuhlaziya izinga lezinye izinkomba: inani leukocytes, amaprotheni, amaseli abomvu egazi. Nge-acetonuria, hhayi kuphela ukuhlolwa komchamo, kodwa nokuhlolwa kwegazi. Ngokuqongelela ngokweqile kwemizimba ye-ketone emchameni, izinga lama-leukocytes ne-ESR livame ukwenyuka egazini, ukugcwala kwama-lipoproteins ne-cholesterol kungaphezulu kokujwayelekile. Ngasikhathi sinye, kukhona ukwehla kwe-chloride ne-glucose
Isivivinyo sokubonisa ekhaya
Ukuqapha izinkomba zezidumbu ze-ketone emchameni ngesikhathi sokulashwa nasekupheleni kokwelashwa, odokotela batusa ukuthenga imichilo ekhethekile ekhemisi. Imisipha yokuhlola okusheshayo yokuthola i-acetone kumchamo ithatha isikhathi esincane, inikeze imininingwane mayelana nezinkomba zemikhiqizo yokubola.
inketho enhle kakhulu ukwenza ukucubungula okuzwakalayo kwezinsuku ezintathu zilandelana,
udinga ukuthenga imichilo eminingana,
inqubo ilula: gcwalisa isitsha esingenantambo ngomchamo wasekuseni, yehlisa umucu ongena uketshezi imizuzwana embalwa,
thola iphepha lokuhlola, hlikihla kancane ngamaconsi asele, linda imizuzu emibili noma emithathu,
ngokuqongelela ngokulingana kwe-acetone, iphepha lizophenduka liphuzi, ngamanani aphezulu, umucu uzophenduka onsomi,
ubumnyama umthunzi wephepha lokuhlolwa ngemuva kokuhlaziywa, maduze nje udinga ukuxhumana nodokotela oyi-urologist ukuze uthole usizo.
Ukwelashwa Okusebenzayo kwe-Acetonuria
Ngokuphambuka okuncane kwe-ketone body indices, udokotela uchaza ukudla nokudla (ama-sorbents). Kubalulekile ukulungisa ukusebenza komzimba kanye nokusebenza kwansuku zonke.
Ngokunyuka okukhulu kwezinga le-acetone kumchamo wesiguli, balaliswa esibhedlela: ukuhlanzwa okuphuthumayo komzimba kusuka emikhiqizweni yokubola kuyadingeka. Ngokudakwa kakhulu, izinkinga eziyingozi, ukulimala kwesibindi, izinso, ukuphuma komzimba okusebenzayo kungenzeka. Ukubambezeleka kokuqala ukwelashwa ngokuntuleka kwamanzi futhi nokuqongelela ubuthi kungakubangela ukufa.
Imithetho eyisisekelo yokwelapha:
I-acetonuria emnene kuya kwe-acetonuria iphathwa ngaphandle kwesisekelo, nge-ketonuria enzima, ukungena esibhedlela kuyadingeka,
ukulungiswa kokudla. Kuzofanela siyeke ukhilimu omuncu omuncu kanye no-ayisikhilimu, imifino ethosiwe nenosawoti, umhluzi oqinile, ama-chip, iziphuzo ezinekhabhoni. Awukwazi ukudla inyama ebhemayo, ukudla okusheshayo, inyama ethosiwe,
ukubuyisela amaprotheni, amafutha kanye ne-carbohydrate metabolism, kubalulekile ukunciphisa ukudliwa kwamaprotheni ezilwane, amafutha, imajarini kanye ne-muffin. Izazi zokudla zeluleka ukushintshela ekudleni okugaya kalula ama-carbohydrate: i-oatmeal ne-mana yemaphaza, isobho semifino, isanqante namazambane ecubuziwe, amakhukhi ebhisikidi, okusanhlamvu okugcwele Izithelo nemifino emisha kuyasiza,
ukuvikela ukomisa ngokuhlanza okungenakugwenywa, kubhalwa irejimeni ekhethekile yokuphuza: ukusetshenziswa kwamanzi abilisiwe ngethisipuni ngalinye ngokuphumula kwemizuzu emi-5 kuye kweli-10. Amalungiselelo awusizo yiRegidron, i-Oxol, i-compote yezithelo eyomisiwe, umhluzi we-chamomile, amanzi amaminerali we-alkaline,
uma kungenakwenzeka ukuthatha uketshezi ngokumelene nesizinda sokuhlanza, ukuphathwa kokudonsa izidakamizwa kuyadingeka. Ezimweni ezibucayi, ngokubhekisele emuva kokuhlanzwa okungavikeleki, imijovo yomuthi uCerucal iyabekwa,
ukwehlisa ukudakwa ngokuqongelela kwezinto ezinama-oxidized ezingenalutho kanye nobuthi botshwala, kunqunyelwe ama-sorbents. Izidakamizwa zesimanje azidingi ukuphuza izandla ezimbalwa, njengekhabhoni esebenzayo yendabuko. Kubalulekile ukuthatha amakhambi we-sorbent phakathi kokudla ukuze ungasusi amavithamini namaminerali emzimbeni. Izidakamizwa ezisebenzayo: Polysorb, Enterosgel, Lactofiltrum, Amalahle amhlophe, i-Multisorb,
nge-anemia, izithasiselo zensimbi zinqunyelwe, ukudla kokukhulisa amazinga we-hemoglobin. Ngokuntuleka kwensimbi, kuyasiza ukudla izimbotshana ezinamafutha zemifino, i-aronia, i-nokunye okufana nokolweni, amapomegranati, isibindi, ama-apula. Ukudla kwe-Acidic akufanelekile.
Funda ngezimpawu ezisetshenziswayo ze-renal artery stenosis kanye nokwelashwa kwe-pathology.
Izimbangela zamagciwane omchamo wabesifazane kanye nezinketho zokwelashwa kwalesi sifo zibhalwe kuleli khasi.
Yiya ku-http: //vseopochkah.com/bolezni/drugie/nefropatiya.html bese ufunda ukuthi yiliphi i-nephropathy ye-hypertensive renal nephropathy nokuthi usiphatha kanjani lesi sifo.
Ukwelashwa kwe-acetonuria kwenziwa ngokusekelwe kuhlobo lwe-pathology etholakele. Isifo sikashukela, i-oncology, i-cerebral coma, ukudla kanye nama-sorbents akwanele. Udokotela ukhetha uhlobo lwezidakamizwa olunaka izici zomuntu ngamunye,
yezifo ze-oncological, i-radiation ne-chemotherapy, izidakamizwa ezisekela inani le-hemoglobin egazini kanye ne-cytostatics edambisa ukukhula kwamaseli womdlavuza iyadingeka,
isiguli sithola ukwakheka okubuyiselayo, amavithamini, ama-immunomodulators,
kubalulekile ukubhubhisa amagciwane ayingozi kanye namagciwane ezifweni ezithelelanayo ukuvikela ukudakwa okuqhubekayo,
ngezikhathi ezithile, isiguli sidlula isivivinyo se-acetone emchameni, sidlula ekuhlolweni okujwayelekile komchamo. Ngokuphikisana nesizinda sokwelashwa okuyinkimbinkimbi, kuncike ekudleni, ekuhlanzeni umzimba wemikhiqizo yokubola, izinga lemizimba ye-ketone lehla ngokushesha okukhulu (kungabikho zifo se-pathologies ezinzima nezifo ze-oncological),
Kubalulekile ukunciphisa ukusebenza komzimba, kepha wazi isilinganiso. Indlela yokuphila yokuhlala phansi yehlisa izinga le-metabolic, kuvuse ukuqina emithanjeni nasezinhlwini zohlelo lwe-genitourinary system, kanye nengozi yokuphindaphindeka kwamagciwane ngokwanda kokuchama komchamo.
I-acetone kumchamo ngesikhathi sokukhulelwa
Izizathu eziqondile zokwanda azikasungulwa. Odokotela bakholelwa ukuthi izidumbu ze-ketone ngokweqile zivela ne-toxicosis sekwephuzile yabesifazane abakhulelwe, ukusetshenziswa njalo kowesifazane amagama ngama-dyes zokwenziwa, okulondoloziwe, ukunambitheka. Ukuhlanza okungalawuleki, okunciphisa kakhulu inani lamanzi emzimbeni, kuyingozi empilweni. I-Ketonuria ivame ukucasulwa ukucindezela okukhulu, izifo zesibindi, i-pathologies ezithathelwanayo.
Owesifazane okhulelwe uvame ukuphumelela ukuhlolwa komchamo okujwayelekile, ukutholwa kokuphambuka okufika ngesikhathi kulula impela. Uma isivivinyo esisheshayo sezinsuku ezintathu naso siqinisekisa i-acetone kumchamo, ke isidingo esiphuthumayo sokuqala ukwelashwa: lungisa ukudla, ukusungula umbuso wokuphuza, ukusheshisisa ukuhlanza umzimba ngokuqongelela ubuthi. Kubalulekile ukuqonda ukuthi yini edala ukwanda kwezinkomba, futhi uthole ukwelashwa uma kungenzeka ukwanda kwe-pathologies engapheli.
Nge-toxicosis, udinga ukuthatha i-Regidron yezidakamizwa, uphuze amanzi ngo-sips omncane, wenqaba okunamafutha, ukudla okusindayo esiswini, kepha awukwazi ukukhawulela ngokuqinile okuqukethwe kwekhalori yansuku zonke. Ama-carbohydrate kumele adakwe okusanhlamvu, amazambane, amabhisikidi omisiwe, ama-apula abhakwe. U-ukhilimu omuncu onamafutha, isaladi, ukhilimu, inyama ebhemayo, inyama ethosiwe nenhlanzi, amakhekhe namakhekhe awathandeki.
Yini okufanele uyenze uma kutholakala umchamo we-umchamo? Ungaziphatha kanjani izimo ze-pathological? Thola izimpendulo zemibuzo yakho ngemuva kokubuka ividiyo elandelayo:
Kusho ukuthini ukuthi umchamo ketone?
Ukwanda kwe-acetone uma kuqhathaniswa nokujwayelekile kubizwa ngokuthi yi-acetonuria noma i-ketonuria. Isici ikakhulukazi se-acetonuria ukumbiwa kwemizimba ye-ketone emchameni, lokhu kufaka phakathi i-acetoacetic acid, hydroxybutyric acid, ne-acetone uqobo.
Ngokwokubuka okusebenzayo, inkomba ngayinye ayihlaziywa ngokwahlukana, kepha basebenzisa umqondo owamukelwa ngokuvamile njenge- “acetone”. Kwakheka nge-oxidation enganele yamaprotheni namafutha ngumzimba womuntu, futhi inobuthi ekugxilweni okuphezulu.
Ukudlula kwesilinganiso sokukhiqizwa kwama-ketones ngaphambi kokugcwala nokuqedwa kwawo kugcwele nemiphumela efana nale:
ukwanda kwe-acidity yegazi,
ukulimala kwamangqamuzana obuchopho aze afike edema yayo,
Amanani we-Urine Acetone
Wonke umuntu okuchama angaba ne-acetone, kepha kuphela ekuhlushweni okuphansi kakhulu. Uma kumuntu osemdala, imiphumela yokuhlaziywa ayidluli kwe-10-30 mg ye-acetone ngosuku, khona-ke akukho ukwelashwa okudingekayo. Egazini labantu abaphilile, ukuba khona kwama-ketones kuphansi kakhulu (kungaphansi kwe-1-2 mg nge-100 ml) kangangokuba akunqunywa ngokuhlolwa okujwayelekile elabhorethri.
Njengoba ama-ketones ayimikhiqizo yesikhashana yemetabolism yemvelo, ngesikhathi sokusebenza okujwayelekile kwamasistimu wesitho, imizimba ye-ketone ifakelwe izinto eziphephile, umzimba ozikhipha ngaphandle kwezinsalela kanye nesithukuthuku, amagesi aqediwe, umchamo.
Ukubala ubukhona be-acetone emchameni, kusetshenziswa inani le-mmol / L. Futhi, izibonakaliso + zisetshenziselwa ukukhombisa ubucayi.
Izici ezikhulisa izinga lemizimba ye-ketone
Ukuxilongwa okulungile kwezimbangela ze-acetone ye-overestimated emchameni kuyisihluthulelo sokwelashwa ngempumelelo kweziguli. Izimo eziholela ekukhuleni kwama-ketones zibhalwe ngezansi:
ukukhathala komzimba ngokuzila ukudla izinsuku ezimbalwa. Lokhu okubizwa ngokuthi "ukuzila ukudla ngomile", lapho empeleni kungaphuzi uketshezi futhi kunengozi yokuphazamisa ibhalansi esezingeni le-acid emzimbeni,
Ukudla okunciphisa umkhawulo ekudleni kwama-carbohydrate, ubukhulu bokudla okunamafutha, okune-protein eningi,
ukusebenza ngokweqile komzimba. Lapho i-glucose ne-glycogen ishiswa ngokushesha, umzimba usebenzisa omunye umthombo wamandla - ama-ketones,
kwabesifazane abakhulelwe. Imizimba yabo ihlale iphoqelelwa ukuthi yakhiwe kabusha futhi inikeze izakhi hhayi zona kuphela, kodwa nengane engakazalwa,
izingcindezi zansuku zonke, ukukhathazeka, ukucindezela komoya,
izinqubo zokuhlinzwa zisebenzisa i-anesthesia ejwayelekile, njengoba kuboniswa yimithombo eminingi, zivame ukuhambisana ne-ketonuria,
imithi. Izidakamizwa ezithile zingavusa ukwanda kwezinga lama-ketones. Ukuthatha izidakamizwa ezifana neStreptozotocin ne-Aspirin kungakhombisa ukwanda okungamanga kwesibalo semizimba ye-ketone ekuhlaziyeni.
Ngokubambisana nalezi zinto ezingenhla, kunezizathu eziyingozi futhi ezidala ukuba khona kwalesi sici ekuhlaziyeni, njengoku:
Isifo sikashukela sazo zonke izigaba nezinhlobo. I-Acetonuria, imvamisa, ingumngane wesifo sikashukela sohlobo 1, ngakho-ke, ngalo mphumela wokuhlaziywa, kungcono ukunikela ngegazi ngoshukela. Uma izinga likashukela likhuphuke kakhulu, khona-ke udinga ngokushesha ukufuna usizo lodokotela.
Inani elanele lama-enzyme akhiqizwa ama-pancreas. Umsebenzi wabo ukuqinisekisa ukwehlukana okufika ngesikhathi nokujwayelekile kwezakhi zomzimba ezingena esiswini. Ngokuntuleka kwama-enzymes anjalo, ukwehluleka kwinqubo yokugaya ukudla kwenzeka, i-metabolism iyaphazamiseka, yona iholele ekuthuthukisweni kwama-pathologies ahlukahlukene.
I-anemia - isilinganiso esifanele sokukhathala nokukhathala komzimba. I-Cachexia (noma ukukhathala) idala ubuthakathaka, ukwehla okukhulu kwezinqubo zomzimba, kwezinye izikhathi, ukwanda kwesimo sengqondo.
Izifo ezithathelwanayo, ezihambisana nezinguquko ekushiseni komzimba - umkhuhlane.
Ubuthi obunotshwala, ukudakwa kokudla, noma izifo zamathumbu kubangela ukwanda kwamazinga e-acetone ngenxa yokucanuzelelwa kwenhliziyo njalo nokuthwala.
Kungakhathaleki ukuthi yini ebangele i-acetonuria, lesi yisimo esiyingozi, esithuthuka ngokushesha. Ukwanda kwe-acetone ekuhlaziyeni kuvame ukukhombisa ukuqhubeka kwesifo. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuguqukela ezinsizakalweni zochwepheshe abanolwazi ngendlela esifike ngesikhathi. Ukwelashwa nokukhethwe ngendlela efanele kuzosiza ukuqeda i-acetone emchameni ngezinsuku ezimbili noma ngokushesha okukhulu.
I-Ketonuria inezimpawu ezinobuntu obuhle obonakalayo ngisho nokubeka abantu. Izimpawu ezilandelayo zizoba ezejwayelekile:
iphunga le-acetone elisuka emlonyeni, emchameni nasekuhlanzeni. Ukudla ukudla kwamaprotheni kuyithuthukisa kuphela,
ukushisa komzimba okuphezulu, okungawi ngemuva kokuthatha izidakamizwa ze-antipyretic,
ukubuna, ngandlela thile ngisho nobumpunga besikhumba,
i-migraines engapheli, emboza wonke umhlaba wesigaxa,
ukugoba esiswini. I-Acetonuria iboniswa yizinhlungu ezinobunzima enkabeni,
isifiso sokugula siyalahleka noma wenqaba ngokuphelele ukudla neziphuzo,
kukhona ukubonakala kobuthakathaka, ukozela, ukunganaki, ushintsho olungazelelwe emood,
cishe konke ukudla kuhambisana nokuhlanza, okungayeki isikhathi eside.
Umuntu olala izinyawo uyakwazi ukubona zonke izimpawu, kepha udokotela kufanele ahlole isiguli, anikeze izivivinyo, aqinisekise ukuthi kutholakele futhi anikeze nemithi yokwelashwa.
Unganquma kanjani i-acetone
Ukunquma inani lezidumbu ze-ketone kumchamo, izindlela ezintathu zokuhlaziya ziyasetshenziswa:
Ukuhlolwa okusheshayo. Ukunquma i-acetone kumchamo ngaphandle kokushiya ikhaya lakho, ungasebenzisa imichilo yokuxilonga ethengiswa kunoma yiliphi ikhemisi. Imichilo embozwe nge-reagent ebucayi ifakwa kumchamo osanda kutholwa imizuzwana embalwa. Ngemuva kwalokho iyasuswa ibekwe endaweni eyomile nge-reagent up. Ngemuva kwemizuzu embalwa, isivivinyo sihlonzwa ngokuqhathanisa umbala wesikhombisi se strip ngesikali esinemibala. Lolu hlobo lokuhlola akulona olunembile kakhulu, kepha luzokwenza ukuthi sikwazi ukuhlola ngokushesha ukwanda kwezinga le-acetone futhi uthathe izinyathelo ezidingekayo zokusiza isiguli.
I-Urinalysis. Kwenziwa ezimweni zelebhu futhi kwenza ukuthi kunqume hhayi kuphela amazinga ama-ketones, kodwa futhi nokwakheka komchamo, kanye nemicroscopy yesiyaluyalu. Isibonelo, inkomba efana nenani elikhulayo lamaseli amhlophe egazi libonisa ukutheleleka, ukuba khona kwamaprotheni kukhombisa i-hypothermia kanye nomthwalo wemisipha owedlulele. Ucwaningo lukhombisa ukuthi yiluphi usawoti kumchamo, noma ngabe une-acid noma i-alkal reaction. Ngakho-ke ezigulini ezinesifo sikashukela kubonakaliswa ukusabela komchamo we-acid.
Ukuqoqwa komchamo nsuku zonke. Ukuhlaziywa okunjalo kuzoba okufundisayo okuningi kakhulu kusuka kumbono wokuthola isifo. Yonke imchamo ekhishwe isiguli amahora angama-24 iyahlolwa. Okubi ngale ndlela ukungakwazi ukuthola umphumela kanye nezindleko eziphakeme zokuqhathanisa.
Ukuqhathanisa isethi yedatha yemiphumela yokuhlolwa kuzonikeza uchwepheshe ithuba lokuqonda isizathu sezinga eliphakeme le-acetone nokuthi yini eyaba provocateur yokwenyuka okunjalo.
Ungawehlisa kanjani i-acetone ekhaya
Kubaluleke kakhulu ukuthatha isinyathelo ngokushesha lapho kuvela izimpawu zokukhathazeka, ngaphandle kokulinda lesi sifo ukuthi sihambe sodwa. Qiniseka ukuthi uthintana nodokotela ozokunikeza ukwelashwa okuya ekhaya noma kwe-inpatient, kuya ngokuthi kutholakala yini lesi sifo.
Ekhaya, okuqukethwe okwandayo kwe-acetone kumchamo kuqala ukuphathwa ngeqiniso lokuthi bayiguqula ngokuphelele indlela yokuphila kanye nokudla. Udinga ukudla okugcwele, okunempilo ngokulinganayo, yenqaba inyama enamafutha.
Akusho ukuthi, lapho welapha i-acetone ekhaya, kubalulekile ukuthatha izangoma (udokotela uzokutshela) futhi wenze ukuhlanza i-enemas "ngamanzi ahlanzekile". Ukugeza kuzosiza ukukhipha ubuthi emzimbeni kanye nokushisa komzimba okuphansi.
Ukukhishwa kwezidumbu ze-ketone kusizwa ukusetshenziswa kwenqwaba ye-ketshezi - okungenani amalitha amabili. Kungcono ukuphuza amanzi ahlanzekile, iziphuzo zezithelo, i-decoction ye-sushi kanye namagilebhisi omisiwe. Uma lesi sifo sihambisana nokuhlanza, khona-ke uketshezi kufanele uthathwe isipuni 1 njalo ngemizuzu emi-5.
Ngemuva kokuba usizi seludlulile, ukhiye wokululama ngempumelelo wukudla okuqinile.
Ngosuku lokuqala lwesifo, udinga ukuphuza uketshezi oluningi, kuyalulekwa ukwenqaba ukudla. Ngosuku lwesibili nangolandelayo, ilayisi, amazambane, izobho zemifino kungeniswa kancane kancane emanzini. Lokhu kudla kubonwa emavikini angu-1-2. Ngokuzayo, imikhiqizo emisha yethulwa ekudleni ngokucophelela okukhulu.
Lapho i-ketonuria ingafaki ukudla okusheshayo, isoda, zonke izinhlobo zenyama enamafutha nenhlanzi, amaqanda ne-confectionery, ukudla okulula kanye nezinyama ezibhemayo, ubisi luphelele kanye noshizi we-cottage shizi, ubhanana nezithelo zika-citrus.
Ezikhiqizweni zenyama ungadla ibele lenkukhu ebilisiwe, inyama ebomvu noma inyama yomvundla. Isobho libilisiwe kuphela kumhluzi "wesibili". Udinga ukudla izithelo nemifino, isinkwa esinsundu, hhayi imikhiqizo yobisi enamafutha.
Ukushintshwa kwendlela yokuphila kusho ukubuka irejimeni yansuku zonke nokulala okujwayelekile okufika ngesikhathi. Kuyadingeka futhi ukulawula ukucindezela ngokomzimba nangokwengqondo.
Imvelo ye-acetone emchameni
Kubalulekile ukuthi uqaphele ngesikhathi izimpawu ze-acetone ezinganeni nakomdala kumchamo. Ukwelapha ngesikhathi kuzosiza ukugwema izinkinga kanye nemiphumela engemihle. Le pathology ivame ukukhombisa inkinga ngesinye isitho noma uhlelo, isebenza njengophawu. I-acetonuria ingabonakala ngokuzimela uma unaka lezi zinto ezilandelayo:
ushukela wegazi ophakeme
ukushisa komzimba okuphezulu
iphunga elinamandla le-acetone lapho uchama,
isifiso sokulala njalo, ukuphumula,
iphunga le-acetone elisuka emlonyeni ngisho nangemva kokuxubha amazinyo akho,
i-crimson ngokweqile noma i-pallor,
isimo sengqondo esingazinzile,
isifo sohudo, ukugabha kanzima ngaphandle kwesizathu esibonakalayo.
Izimbangela ze-acetone kumchamo kubantu abadala
Izizathu zokubonakala kwemizimba ye-ketone ngeminyaka ehlukene ihlotshaniswa nokuphambuka okuthile ekusebenzeni komzimba. Kubantu abadala, lezi zizathu ezilandelayo zingasebenza njengesizathu sokukhula kwe-acetone kumchamo:
amanani amaningi okudla okunamafutha ekudleni,
ngendlala ende, ukuntuleka kwama-carbohydrate amaningi ekudleni,
amanani ngokweqile amaprotheni ekudleni
i-acetone eyeqile ingahlotshaniswa nokuhlinzwa ngaphansi kwe-anesthesia ejwayelekile,
ukuzikhandla njalo emzimbeni,
okuqukethwe yi-acetone kuphezulu ezigulini ezinesifo sikashukela mellitus,
I-toxosis enkulu ngesikhathi sokukhulelwa ngokuhlanza njalo,
ukusetshenziswa kabi kotshwala
ubuthi bomzimba ngenxa yokungena kwezinto ezinobuthi.
I-acetone emzimbeni ingakhula ngokuhambisana nokwenziwa kwamanye ama-pathologies athinta ukusebenza komzimba, isibonelo:
izifo ezingathi sína
ukwakheka kwamapheshana emathunjini we-neoplasms enobungozi,
ukulimala kohlelo lwezinzwa ngenxa yobuhlungu,
isimo esingokomzwelo njalo, esicindezelayo.
I-Acetonuria - incazelo ejwayelekile
I-acetone ephakeme kumchamo, i-acetonuria, noma i-ketonuria - ngalinye lala magama libhekisela ekwenyukeni kwe-pathological komchamo wezinto okuthiwa izidumbu ze-ketone, ukwakheka kwalo okuwumphumela wokuphazamiseka kwe-metabolic okuhlobene nokuqhekeka okwanele kwezinto zomkhondo ngamunye, ngokwesibonelo, amafutha namaprotheni. Ukuphambuka kwalolu hlobo kungokwemvelo ehlukile, futhi kungaphepheka ngokuphelele uma izingxenye ze-ketone zivela ngamanani amancane.
Ngokwezibalo zezokwelapha, njengamanje, isibalo sabantu abanezinkomba zabo abangahlangabezani namazinga e-acetone kumchamo ukhula ngokushesha okukhulu. Kulesi simo, i-pathological phenomena ingavela ezinganeni nakubantu abadala. Ukuchaza lo mkhuba kulula kakhulu - enye yezici ezibangela ukungondleki kahle, umkhuba wokudla ukudla okunamafutha nokuningi. Kepha kungukudla okuyikho ngqo okwakha ukudliwa kwabantu banamuhla.
Izizathu zokuvela kwabadala nasezinganeni
Ungakhombisa izici ezahlukahlukene eziholela ekubonakala kwe-acetone emchameni womuntu omdala, izimbangela ze-pathology zivame ukulandelayo:
Enye yezimbangela ezivamile ezithinta i-acetone kumchamo wabesifazane ukuvinjwa okuvamile kwamakhokhalori noma, umane, ukulandela ukudla okuqinile noma ukuyeka ukudla ngokuphelele.
Izimbangela ezivame kakhulu zokuvela kwe-acetone kumchamo ukwephulwa kokudla, kanye nokubikwa kokudla kwamaprotheni kanye ne-carbohydrate ekudleni kwansuku zonke. Kulokhu, izinsizakusebenza zomzimba azanele ukuphula ngokuphelele lezi zinto.
Ukuvela kwe-acetone kumchamo kubantu abadala kungabangelwa ukuzikhandla ngokweqile komzimba. Ukwenza isimo sibe ngokwejwayelekile ezimweni ezinjalo, kwanele ukuhlinzeka ngomzimba ukuphumula okudingekayo. Ngaphezu kwalokho, isimo se-pathological singaba umphumela wokudla kwamaprotheni.
Izinga le-glucose elingazinzile ku-hemolymph, icasulwe izinhlobo ezahlukahlukene zesifo sikashukela, kanye nezindawo ezikhulunywa nge-prediabetesic. Kulokhu, amazinga aphakeme we-acetone noshukela emchameni abangelwa ukungasebenzi kahle kwephancreatic, kanye nokubuka ukudla okuqinile ngokweqile. Ukuze uqonde imbangela ye-pathology futhi uyiqede, isiguli sidinga ukubonana nodokotela.
Kwabesifazane esikhathini sokuzivocavoca umchamo, i-acetone ingaba ngumphumela we-toxosis enzima, ehambisana nokuhlanza njalo nokukhathala komzimba okujwayelekile.
I-acetone kumchamo kubantu abadala ingaba yimiphumela yokuphazamiseka kwe-metabolic ngenxa yokudakwa okujwayelekile komzimba ngezidakamizwa ezinamandla, iziphuzo eziqukethe utshwala, izinto ze-psychotropic. Ngasikhathi sinye, ukusetshenziswa njalo kanye kwesikhathi esisodwa kwezimali ezinjalo kungaholela emiphumeleni emibi.
Udinga ukwazi ukuthi i-acetone isho ukuthini kumchamo wabantu abasha, kanye nezingane ezingaphansi kwesigaba sobudala. Imbangela evame kakhulu ukuba khona kwezifo ze-pancreatic gland ezihambisana namaphutha kokudla okunempilo noma ukubonakaliswa kwezimpawu eziyinhloko zezifo zesistimu ye-endocrine.
Ukuba khona kwe-acetone kumchamo kunezimpawu ezithile. Kungenzeka usole ukuthuthukiswa kwanoma iyiphi i-pathologies ehambisana nalokhu kwephula umthetho ngemuva kwesibonakaliso sohlobo olulandelayo:
Iphunga le-"acetone" elinobuntu elibonakala ngesikhathi sesenzo sokuchama.
Kuvela iphunga elifanayo lapho uphefumula.
Kunezimpawu zokuwohloka kwempilo yonke, okubandakanya ubuthi, ukudangala, ukunganaki.
Kufanele wazi ukuthi unganquma kanjani ukuba khona kwe-acetone ezinganeni ezinomchamo. Kulesi simo, ukubonakaliswa kwemitholampilo kungaba nomlingiswa ohluke kakhulu: ukuwohloka okujwayelekile enhlalakahleni kuyaphawulwa, isifiso sokudla siyalahleka noma siyalahleka ngokuphelele, ingane iba nokubabulala, ibenomunyu.
Ukuhlolwa komchamo kwe-acetone kusetshenziselwa ukuxilongwa kwe-ketonuria. Inqubo ingaphezu kokulula, isifundo somtholampilo esivamile somchamo sanele ukuthola imizimba ye-ketone. Uma isiguli sinesifo sikashukela noma izinsolo zokuthuthukiswa kwalokhu kugula, ukuhlolwa komchamo ushukela ne-acetone nakho kungenziwa njengesinyathelo esengeziwe sokuxilonga.
Ngokusho kwehlukahlukana kwesimo somzimba, akumele kube nezidumbu ze-ketone emchameni womuntu ophilile. Kufanele futhi kwaziwe ukuthi bangabakhona, kepha ngamanani amancane kakhulu ukuthi izindlela zokuxilonga azibavumeli ukutholwa ngesikhathi sokuhlolwa kwe-urinalization ejwayelekile. Kepha kusho ukuthini uma kutholakala into ethile? Kulokhu, kusebenza okulandelayo:
Uma i-acetone itholakele ngamanani athile, ubukhona bayo bugcizelelwa ngamapula, iziphambano, noma amayunithi aqokwe njenge-mmol. I-1 noma inani elilodwa elihle linquma ukuba khona kwezidumbu ze-ketone, kepha akubhekwa njengesimo esisongela impilo yesiguli. Imvamisa, lokhu kwenzeka ngokwephula ukudla.
Uma kuneziphambano ezi-2 noma ezi-3 kumchamo, ukuba khona kwezidumbu ze-ketone kuthathwa njengokuhle. Ukuvela komchamo wamayunithi angaphezu kwe amabili we-acetone kudinga ukwelashwa.
Uma iphrothokholi ibonise iziphambano ezi-4, lesi simo sidinga ukunakekelwa ngokushesha kwezokwelapha. Kumele kuqashelwe ukuthi inani elinjenge-4 mmol, futhi kwezinye izimo - i-5, ngaphandle kwalokho, kanti kutholakala ukuthi udakiwe kakhulu emzimbeni. Lapho kutholakala amayunithi amane e-acetonuria, akuyona ingozi yezempilo kuphela, kodwa nempilo yesiguli.
Kodwa kuthiwani uma kukhona izinsolo ze-ketonuria, kepha ayikho indlela yokuhlola umchamo elabhorethri? Kulokhu, ungasebenzisa imichilo ekhethekile yokuhlola, ethengiswa emakethe yamahhala. Ukuthola imiphumela eyanele, kuyadingeka ukwenza inqubo yezinsuku ezintathu.
Kubalulekile! Uma idatha ebakhona yokulandela i-acetone etholakele ngemuva kokuhlolwa iqondile, lokhu kubonisa i-acetonuria. Ukuvimbela imiphumela emibi empilweni, kufanele uthintane nochwepheshe ngokushesha.
Yini i-acetone eyingozi? Kuyadingeka yini ukwelapha lesi simo? Ezimweni zomtholampilo ezingahambelani nokukhula kwesimo esibeka impilo yakho isiguli engozini, izindlela zokwelapha zingafaka kuphela izinqubo okuhloswe ngazo ukuhlanza umzimba, kanye nokulandela ukudla okuqinile. Uma i-acetone kumchamo ikhona ngobungako obukhulu, ukulashwa kwesibopho kwesiguli kuyadingeka, kulandelwa ukwelashwa kwe-detoxification.
Ukwelashwa kwe-acetonuria kufaka ukusetshenziswa kwemithi eklanyelwe ukudambisa izimpawu ezibonakalayo ze-pathology, kanye nokususwa kwezakhi ezinobuthi emzimbeni. Kumele kuqashelwe ukuthi le nto yakhiwa ngokuyinhloko isemuva kokuba khona kwanoma yiziphi izifo, ngokulandelana, ukwenza isimo sibe sesijwayelekile, ukwelashwa kwezifo eziphambili kudingekile.
Njengengxenye yokubhekana ngqo nemiphumela ye-ketonuria, kungenzeka kusetshenziswe lezi zidakamizwa ezilandelayo:
Ikhabhoni emhlophe noma emnyama eyenziwe yasebenza. Hlanza umzimba ngokuphumelelayo ngokumunca, ukuvimba ukungena kwezinto ezinobuthi ekujikelezweni kwe-systemic.
I-Rehydron, i-Polysorb. Zinezakhiwo ezifaka isandla ekukhuphuleni amandla omzimba futhi zenze isimo se-microflora futhi senze isimo somzimba sibe ngcono.
IsiTserukal. Kwezinye izimo, i-acetonuria ihambisana nokuhlanza kakhulu. Lesi sidakamizwa sisetshenziselwa ukwenza lesi simo sibe njengesiqhelo futhi sivimbele ukomelela okukhulu.
Njengomuthi owengeziwe odingekayo ngokumelene nesizinda sokubukeka kwe-acetone kumchamo, umuthi onosawoti ophethwe ngaphakathi futhi ohloselwe izinqubo zokuphamba emzimbeni ungasetshenziswa.
Kumele kugcizelelwe ukuthi into efana nokubonakala kwezidumbu ze-ketone, i-acetoacetic acid emchini yenzeka ikakhulu ngenxa yokwephulwa kwemithetho yokudla okulinganiselayo, ukusetshenziswa kwenqwaba yemikhiqizo, ukwakheka kwayo okugcwele ama-carbohydrate, amaprotheni. Ngakho-ke, ukuze isimo sijwayelekile futhi sinqande imiphumela emibi, kudingeka ukudla okuqinile okuqinile. Izimiso eziphambili zokudla okunempilo komtholampilo yilezi:
Okokuqala, kufanele uphuze uketshezi oluningi. Ngani? Ukuntuleka kwayo emzimbeni kuholela ekuphepheni komzimba, ukuphazamiseka kwe-metabolic, okuholela ekuthuthukisweni kwe-acetonuria. Ukugcwalisa ukusilela kokuswakama, kanye nokuqeda ubuthi, udinga ukuphuza izithelo ezahlukahlukene ezihlotshisiwe, ngokwesibonelo, ezilungiselelwe kusuka kumajikijolo amasha noma izithelo ezomisiwe. Ama-sweeteners akufanele anezelwe eziphuzweni ezinjalo.
Ungadla imikhiqizo yenyama, kepha kufanele ukhethe izinhlobo ezinciphile kuphela. Ngaphezu kwalokho, kungakuhle ukudla izinhlanzi nezinhlobo ezahlukahlukene zokudla kwasolwandle.
Kubalulekile ukuqeda ngokuphelele amabhlogo, inyama enamafutha, inyama ebhemayo, ukudla okusemathinini, izinongo, izinongo. Awukwazi ukuphuza utshwala, itiye elimnyama eliqinile, ikofi.
Ukuze kususwe ngempumelelo ubuthi obuhlukahlukene obuvela emzimbeni, kuyadingeka ukufaka ekudleni okuningi okusha ngangokunokwenzeka, kanye nemifino ephathiswe ukushisa yesikhashana, amajikijolo, izithelo.
Kumele kugcizelelwe ukuthi njengamanje kunomkhuba owandayo ekutholakaleni kwe-acetonuria ezinganeni. Ngokusho kochwepheshe abaqeqeshiwe, lokhu kunquma imodi engalungile nesikimu samandla. Ukwanda kwenyama, imikhiqizo eseqediwe, amaswidi ekudleni kwengane kanye nokuntuleka kwemifino, izithelo, imikhiqizo yobisi kuholela ekuphazamisweni kwe-metabolic futhi, ngenxa yalokho, ukwakheka kwe-acetone kumchamo.
Uma inani le-acetone kumchamo lingabalulekanga, umuthi ohlukile uzosiza usenze sibe ngcono isimo. Kodwa-ke, umuntu akufanele abahlukumeze, futhi futhi akhumbule ukuthi ukusetshenziswa kwaleyo kuvunyelwe kuphela ngemuva kokubonisana nochwepheshe. Imvamisa ekhaya kwenziwa lokhu okulandelayo:
I-Enema evela kusawoti. Le ndlela iyasebenza uma esinye sezizathu zokubonakala kwezidumbu ze-ketone emchameni yinqubo yokutheleleka ethinta isibeletho samathumbu. Ukuze ufeze lolu hlobo lwenqubo, kufanele uchithe isipuni esikhulu solwandle noma usawoti wethebula ojwayelekile kwilitha lamanzi afudumele, bese wenza i-enema. Ukwenza inqubo enjalo isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezintathu akunconywa ngokwezigaba, ngoba lokhu kungaholela ekuphazamisweni kwe-microflora.
Isiqu se-Chamomile. Ukuze ulungiselele ithuluzi elizosiza ekuhlanzeni umzimba, lisuse amakhompiyutha anobuthi, futhi libe nomphumela wokuthoba, kunconywa ukukhipha isigamu selitha lamanzi abilayo ngamasipuni amabili ama-inflorescence e-chamomile, bese usiphuzisa isiphuzo ihora elilodwa noma amabili. Lapho umhluzi usulungile, kuyadingeka ukuwuhlukanisa ube izingxenye ezinhlanu, engeza amanzi amancane ngakunye futhi uphuze ngezikhathi ezithile.
Njengoba kushiwo ngenhla, ngobuningi bamacala emitholampilo, i-acetonuria iwumphumela wokwephulwa kwemithetho eyisisekelo yokudla okunempilo. Ukuvimbela ukuthuthukiswa kwesimo se-pathological enjalo, ukunakwa okufika ngesikhathi kufanele kukhokhwe ekudleni okujwayelekile, okwenza ushintsho oludingekayo kukho. Isibonelo, kungakuhle ukulahla ukudla okumnandi ngokweqile, okunamafutha, okusindayo, okunosawoti, amasoseji, ukudla okulula, ama-muffin noshokoledi. Ukusetshenziswa kotshwala nezidakamizwa ezinamandla kufanele kungabandakanywa uma ukuphuza kwabo kungabalulekile.
Ukugqugquzela izinqubo ze-metabolic, ukuhlanza ubuthi kanye nobuthi, kuyadingeka ukusebenzisa isilinganiso esifanele soketshezi, kufaka phakathi imifino, okusanhlamvu, i-legumes, okusanhlamvu, izithelo, nemikhiqizo ye-lactic acid kwimenyu. Le mithetho engenhla ibaluleke kakhulu ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokudla kwengane. Ukwamukela ngesikhathi izindlela zokuvimbela kuzosiza ukugcina impilo futhi kuvikele imiphumela emibi eminingi.
Odokotela baphawula ukuthi kwezinye izimo i-acetonuria iba khona kwabesifazane abakhulelwe, kepha abakwazi ukuchaza imbangela eqondile yokuvela kwemizimba ye-ketone. Kunezinto ezimbalwa ezingathinta ukuvela kwalesi sifo:
Ukwehla okungabonakali kokungazinzi komzimba.
Umthelela ongemuhle kwezemvelo.
Ukucindezela okuqinile kwengqondo ngaphambi nangesikhathi sokukhulelwa.
Ukuba khona kwezivikelo, imibala, ukunambitheka namanye amakhemikhali ekudleni.
I-Toxicosis ngokuhlanza okungapheli. Kulesi simo, kubaluleke kakhulu ukubuyisa ibhalansi yamanzi: ukuphuza amanzi ngo-sips omncane, ezimweni ezinzima, kungadingeka ukuphatha ngaphakathi. Ngokulashwa okufanele, i-acetonuria inyamalala ezinsukwini eziyi-12.
Imvelo ye-acetone kumchamo wengane ifana nomzimba womuntu omdala, kepha isandiso sengane siphakeme. Ukukhula ngokushesha komzimba, umsebenzi owandayo, ukusha ngokushesha amakhalori kukhulisa isidingo somzimba owengeziwe. Ngokungafani nabantu abadala, umzimba wengane awunayo i-glycogen enjalo, lesi sakhi sibamba iqhaza ekwakhekeni kwe-glucose, yingakho kukhula i-acetone enganeni. Ukushoda ngokomzimba kwama-enzyme kuholela ekwandeni kwenani lemizimba ye-ketone.
Ngisho nokuncane, ukuphazamiseka kwesikhashana kungadala ukuvela kwe-acetone ezinganeni emchameni. Imvamisa inkinga ihamba ngaphandle kokwelashwa kwalesi sifo, kepha kwezinye izimo lokhu kungakhombisa ukuthuthukiswa kwama-pathologies angathi sína. Izizathu zokukhula kwe-acetonuria enganeni yilezi zinto ezilandelayo:
isimo sezulu esishisayo
ukucindezela ngokomzimba, ngokomzwelo, ukusebenza ngokweqile,
ukuntuleka kwama-carbohydrate, amakhalori, ukuzila isikhathi eside,
inani elikhulu lokudla elinamafutha, amaprotheni,
Izimbangela zokuthuthuka kokukhula kwe-acetonuria zichazwe ngenhla, kepha ezimweni ezingama-90% lokhu kuphambuka kuhlobene nokungazinzi kohlelo lwe-enzyme, imfucuza enkulu yamandla, kanye nokwephulwa kokudla. Izinkinga ezinkulu kakhulu emzimbeni nazo zingadala ukukhula kwe-acetone ngesikhathi sokuchama:
izifo ezingathí sina
ukuphazamiseka kwemizwa, isifo sikashukela,
ukwanda kwe-pathologies engapheli,
isifo sohudo, ukugabha,
ukudakwa ngemuva kokudla ngamakhemikhali, ubuthi bokudla,
ukuphazamiseka kokugaya ukudla
Izibalo Zengqondo Zesophagus,
Ingozi ye-acetonuria ngesikhathi sokukhulelwa
Ukubonakala kwezidumbu ze-ketone emchameni kuba yinkinga ekhombisa isimo se-pathological. Imvamisa iba yisizathu sokulaliswa esibhedlela okuphuthumayo. Imbangela ejwayelekile yokwanda kwe-acetone ngesikhathi sokukhulelwa yi-toxicosis, ekhula kanye nokuhlanza kanzima. Lesi simo sivame ukuhambisana nokuphelelwa ngamandla, okucasulayo ukuvela kwe-acetone emchameni.
Esinye isizathu esivamile ukungondleki, ngakho-ke akufanele udle amanoni amaningi futhi amnandi ngesikhathi sokukhulelwa. Ukwesaba ukukhuluphala kubangela ukuba abesifazane bazilinganisele ekudleni, abanye baqala ukubulawa yindlala, okuholela emiphumeleni eyingozi futhi kungadala ukukhula kwe-acetonemia. Kunconywa ukuthi udle kaningi futhi ngokweziqeshana ezingxenyeni ezincane, kunciphisa kuphela inani lokudla okuthosiwe nofulawa.
Kungenzeka ukuthola okuqukethwe okukhulayo kwemizimba ye-ketone ngisho nokuhlolwa kokubonakalayo kwesiguli.Izimpawu eziphambili ukucindezeleka, ukulahlekelwa yinhliziyo, izinhlungu esiswini, ushintsho ekushiseni komzimba, isicanucanu nokuhlanza, ikhanda. Ukuthola okuqukethwe emizimbeni ye-ketone, kusetshenziswa izivivinyo ezisheshayo noma ukuhlolwa kwelabhoratri (urinalysis).
Esikhathini sikashukela, i-acetone ephakeme emchameni ivame kakhulu. Okujwayelekile kungadlulwa ngenxa yezizathu eziningi, ngoba ngalesi sifo izinhlelo eziningi azisebenzi kahle. Ngokuqondene nenkomba eyamukelekayo, lapho-ke, njengabantu abanempilo, isezingeni le-0.5 mmol / l.
Phakathi kwezinto ezibalulekile eziholela ekwandeni kokuqukethwe kwama-ketones agcwele emzimbeni, okulandelayo kungahlukaniswa:
ukudla ukudla okunamafutha kakhulu nezinongo,
ukulindwa ngokweqile kwemizwa
ukwehluleka ekusebenzeni kohlelo lokugaya ukudla,
umsebenzi oqinile womzimba,
izifo ezahlukahlukene zezinso,
ukudla okuqinile kakhulu
ukwephulwa kwemali esele.
Abantu abanesifo sikashukela kufanele banake kakhulu ekudleni kwabo, ngakho-ke bavame ukuhlala ekudleni okune-calorie aphansi. Abanye abantu bayenza iqine kakhulu, ngomphumela wokuthi ekugcineni bahlakulele i-acetonuria.
Yini okufanele uyenze ngokuqukethwe okuphezulu kwama-ketones agcwele?
Uma uqaphela zonke izinkomba ze-acetonuria nemiphumela yokuhlola iqinisekisa ukuthi inqubo ye-acetone yegazi iphakeme, khona-ke ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kuyadingeka.
Ngeke kusebenze ngokwayo ukubhekana ne-pathology, ngoba le nkinga idinga ukwelashwa okuyinkimbinkimbi, okuhloswe ngakho okulandelayo:
Ukuqedwa kokubonakaliswa kwemitholampilo,
ukukhetha ukudla okufanele
ukuzimisela kanye nokuqedwa kwembangela ye-acetonuria.
Uma okuqukethwe okuphezulu kwama-ketones kubangelwa noma yikuphi ukutheleleka, khona-ke inkambo yemithi elwa namagciwane nama-enterosorbents inqunyelwe. Ukunciphisa umthelela omubi wale mishanguzo kwi-microflora yamathumbu, kunconyelwa futhi ukuphuza ama-immunomodulators. Ukubuyisela ukwakheka okujwayelekile kwamakhemikhali egazi kanye ne-acid-base esele, kusetshenziswa amaconsi. Ngaphezu kwalokho, isiguli kufanele siphuze uketshezi oluningi ngangokunokwenzeka, sinamathela ekudleni okunempilo okunempilo futhi uchithe isikhathi esiningi ngaphandle.
Ungawehlisela kanjani izinga le-acetone ekhaya?
Nge-acetonuria, into yokuqala okufanele uyenze ukushintsha kakhulu indlela yakho yokuphila ejwayelekile. Kuyadingeka ukukhipha ukudla okuthosiwe, okunezipayisi nokunamafutha ekudleni kwakho kwansuku zonke, ukunciphisa ukusebenza komzimba nokulala okungenani amahora angama-8 ngosuku ukuze uqinisekise ukuthi umzimba uphumula kahle.
Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuthatha i-sorbents, ekhethwe udokotela ngokususelwa esithombeni somtholampilo kanye nesimo sezempilo sesiguli, kanye nokwenza i-enemas yokuhlanza. Ukwenza ngcono ukususwa kwe-acetone emzimbeni, udinga ukuphuza uketshezi oluningi. Kungaba kokubili iziphuzo ezijwayelekile zamanzi nezithelo, amakhompiyutha netiye eliluhlaza. Lapho izimpawu ze-pathology zinyamalala ngokuphelele, kubalulekile kakhulu ukuqapha indlela odla ngayo. Kungakufanele ukulahla ukudla okusheshayo nanoma yimiphi imikhiqizo eyingozi, ukudla izithelo eziningi nemifino, nenyama yokudla ebilisiwe noma eboshiwe. Ukulandela lezi zeluleko ezilula, uzokhohlwa njalo ukuthi iyini i-acetonuria.
Ukuhlolwa kwe-Urine Acetone
Imichilo ekhethekile iyathengiswa ekhemisi ekhombisa okuqukethwe izidumbu ze-ketone emchameni. Ulwazi olukhethekile olusetshenziswayo aludingeki, lungasetshenziswa ngisho nengane encane. Njengomthetho, athengiswa ngawodwana, kepha ungathenga isethi. Ikhithi iza nesitsha esikhethekile esenziwe ngensimbi noma ngeplastiki, kukhona ongakhetha ngamabhodlela engilazi. Izindleko zokuhlolwa ziphansi, ngakho-ke wonke umuntu angakwazi ukuyikhokhela ukuthi ahlole okuqukethwe komzimba we-ketone njalo.
Kunconywa ukuthenga imichilo eminingana ngesikhathi esisodwa ukuze wandise ukuthembeka ocwaningweni. Lapho usanda kuphuma embhedeni, udinga ukuqoqa umchamo wasekuseni, wehlise isivivinyo kuwo. Kungekudala kuzovela inkomba kuso, esizokhombisa umphumela. Uma kuvela umbala opinki, khona-ke okuqukethwe kwe-acetone kuphansi. Uma ngemuva kokuphendula umucu uphendulela onsomi, okuqukethwe kuphezulu futhi udinga usizo ngokushesha.
Ukuhlolwa komchamo kwe-acetone
Uma umbala womucu ukhombisa ukuba khona kwezidumbu ze-ketone, khona-ke ubukhulu bayo kufanele bunqunywe. Uvivinyo alunikezi imininingwane enjalo; ngoba lokhu kuhlaziywa kwelebhu kwenziwa. Umchamo omusha oqoqwe ekuseni kufanele uthathwe ukuze uhlolwe. Umphumela uzokhombisa okuqukethwe kwedijithali kwe-acetone emchameni. Kunconywa ukuthatha lokhu kuhlaziya minyaka yonke ukuze uqaphele ukukhula kwezakhi ze-ketone ngesikhathi futhi uvikele ukuthuthukiswa kwe-acetonuria noma ezinye izindlela eziyingozi.
Isisekelo sanoma yikuphi ukwelashwa ukuqedwa kwembangela ye-pathology. Le yindlela yokususa i-acetone emzimbeni wengane noma kumuntu omdala. Udokotela kuphela odonsa irejimeni yokwelashwa, kwenqatshelwe ukwenza lokhu eyedwa. Ekwelapheni i-acetonuria, kuthathwa izindlela ezilandelayo zokwelapha:
ukwethulwa kokudla kokudla okunokuqukethwe okuphezulu kwama-carbohydrate,
isiphuzo se-alkaline: amaminerali wamanzi we-alkali, isisombululo se-soda,
ukunciphisa ukuncipha kwamaprotheni, ukudla okunamafutha,
ukwelashwa ngezidakamizwa, ama-Enterode, ama-Essentiale, ama-Methionine nama-Enterosorbents anqunyelwe: I-smecta, Polysor, Enterosgel, Polyphepan, Filtrum,
ukumfaka kokudonsa usawoti emthanjeni,
alkaline yokuhlanza enemas.
Lesi ngesinye sezizathu ezijwayelekile zokwanda kwenani lezinto ze-ketone. Leli yiphuzu eliyimpoqo lokuphathwa okuphelele kwengane nomuntu okhulile. Kunezincomo ezijwayelekile zokudla, ezibekwe etafuleni elingezansi:
Isobho kumhluzi wethambo, inyama.
Ubisi olumnandi, ukudla okunamafutha.
Amanzi amaminerali ngaphandle kwegesi, i-compote yezithelo eyomile.
Izitsha ezintsha noma ezihlutshiwe.
Utamatisi, isitshalo seqanda, upelepele, i-rhubarb, iparsley, isipinashi kanye no-sorrel.
Umhluzi wamakhowe namakhowe.
Chocolate neminye imikhiqizo cocoa.
Ama-apula abhakisiwe, ummbila.
Imisipha yokukhiqiza yezimboni.
Ukudla okusheshayo, ama-chip, ama-crackers.
Umchamo akufanele uqukathe inani elikhulu le-acetone, lokhu kubonisa ukuthuthukiswa kokukhubazeka. Ukuze ubavimbele, kubalulekile ukwenza izindlela zokuvimbela ezizosiza ukugwema ukuthuthukiswa kwalesi sifo noma ukuthola abanye ngesikhathi. Odokotela beluleka ukulandela izincomo ezilandelayo:
Minyaka yonke kuyadingeka ukuthi uhlolwe njalo nguchwepheshe futhi uthathe umchamo ukuze uwuhlaziye.
Zonke izinsuku kufanele uphuze okungenani amalitha ayi-1,5 koketshezi, futhi mhlawumbe amalitha ama-2.
Ungavumeli ukungasebenzi ngokomzimba, nsuku zonke udinga ukuzivocavoca ngokulinganisela.
Ngaphambi kokuqala ukudla, qiniseka ukuthi ubonana nodokotela wezempilo. Ukungondleki kuvame ukudala umchamo ukuthi wandise i-acetone.
Izimpawu ze-acetonuria ziqala ngemithi engafanele, ngakho-ke inkambo yokwelashwa kumele ivumelane nodokotela.
Kunconywa ukuba ulahle imikhuba emibi.
Ama-glucometer we-Accu-imininingwane ewusizo nokuhlaziywa komugqa
Ukwelashwa kwesifo sikashukela nge-homeopathy: izidakamizwa ukwehlisa ushukela wegazi
Ungayisebenzisa kanjani umuthi i-Tsiprolet 500?
I-Metformin: isenzo nemiphumela emibi, ukuthi ungayithatha kanjani ukuze unciphise isisindo
I-Mummy yesifo sikashukela sohlobo 2: ukubuyekezwa kokwelashwa
I-Bulgur yesifo sikashukela: izakhiwo, inkomba ye-glycemic nemithetho yokusebenzisa
Ukusetshenziswa kwe-bulgur yesifo sikashukela Ukusetshenziswa kwezinsimbi zikakolweni kuboniswa kwisifo sikashukela uma isiguli singakhuluphele futhi sikubekezelela ngesineke gluten. ...
Ingabe i-rosehip iphansi ushukela wegazi? Izinzuzo ze-rosehip kushukela
Ukwelashwa kwesifo sikashukela nguLouise Hay: Iziqinisekiso kanye nePsychosomatics
Umlenze uphuthuma, unyawo lwesifo sikashukelaIzinhlobo NezinhloboInsulinUkuhlaziyaUkuxilongaUkwelashwa nokuvimbelaI-Dummy DiabetesicsImibuzoIzinkinga zesifo sikashukelaImithi
I-Insulin Ehlisiwe: Kungani I-Hormone Yegazi Iyancipha
Ukwelashwa ngonyawo lukashukela waseCuba
Ungathola ama-apula abhakwe nge-cottage shizi kuhhavini ngesinyathelo
Ukuthi i-fructose ihluke kanjani kushukela: umqondo, isincazelo, ukwakheka, ukufana, umehluko, ubuhle nokulimala kokusetshenziswa
Johnson imitha kashukela
I-Kissel yabanesifo sikashukela: ngingaphuza yini ngesifo sikashukela sohlobo 2